I-Old Stables Guesthouse - eNocton
I-Old Stables Guesthouse itholakala edolobhaneni elihle laseNocton eduze nedolobha elinomlando iLincoln. INocton ihlinzeka ngokufinyelela emaphandleni amahle nedolobha laseLincoln kanye neLincolnshire Wolds edumile etholakala kalula. I-Old Stables Guesthouse iyisenezelo esizimele esakhiweni esingokomlando esake saba izitebele ze-Earl of Ripon, umnikazi weNocton Hall.
I-guesthouse iwuphiko olusanda kubuyiselwa futhi oluzibambele mathupha, oluxhunywe nesakhiwo esikhulu. I-guesthouse inomnyango wayo wangasese ohlanganisa iphasishi eliholela endaweni yokuphumula, ikhishi nendawo yokudlela.
Kusuka endaweni yokuphumula kunekamelo lokulala eline-en-suite yangasese enegumbi elimanzi. Izitebele zilungele abantu abangu-2 kodwa umbhede wosofa osendlini yokuphumula ungasetshenziselwa ukulala ezinye izivakashi ezi-2. Singakwazi futhi ukuhlalisa izingane kanye nezinsana ngokutholakala kombhede kanye nesihlalo esiphezulu.
Indawo futhi ilungele izivakashi ezinokuhamba okulinganiselwe. Ukufinyelela kusijobelelo kulinganiselwe. Kunesinyathelo esincane phakathi kwegumbi lokuphumula negumbi lokulala kodwa igumbi elimanzi lisezingeni elilodwa .
Ikhishi lihlome kahle futhi lihlanganisa ihhavini eligcwele, i-microwave, iketela, i-toaster, umshini wekhofi weNespresso, kanye nehobhu encane yokungeniswa. Ngaphezu kwalokho ephaseji kukhona ukusetshenziswa kwesiqandisi esifaka amanzi ahlungiwe kanye nomshini weqhwa.
Ekamelweni kukhona ikhabethe elikhulu elinamakhabethe angaphakathi kanye neyunithi yekhabethe elihlukile. Inala yesitoreji sezivakashi ezifisa ukuhlala isikhathi eside.
Kokubili igumbi lokuphumula nekamelo lokulala kunamathelevishini anekhono le-smart tv ukuze ukwazi ukufinyelela ku-Netflix/Amazon njll. Ngaphezu kwalokho umabonakude wegumbi lokuphumula unephakheji ye-Sky. Isijobelelo siphinde sibe nesidlali se-dvd futhi izivakashi zingaletha ama-dvd azo noma ziboleke amanye ethu.
I-High Speed WiFi iyatholakala ku-Annex.
INocton iyidolobhana elinomlando elihle elicishe libe ngamamayela ayi-7 eningizimu yeLincoln. Kuthatha cishe amaminithi angu-15-20 ngemoto ukuze ungene enhliziyweni ye-Lincoln yomlando. Enye indlela yidolobha lase-Victorian spa laseWoodhall Spa, eliqhele ngamaminithi angu-20.
Endaweni, amadolobhana amakhulu aseMetheringham naseBranston womabili aqhele ngamaminithi angu-5 ngemoto futhi afaka izitolo, izindawo zokucima ukoma, amathilomu, osokhemisi kanye nezindawo zokudlela ezidliwayo.
Kusuka ezitebeleni ezindala kunezindawo eziningi zokuhamba ezinhle zasemaphandleni esingaluleka ngazo kuwo wonke amakhono. Idolobhana linehlathi elinomlando okuthi entwasahlobo lihlanganise nezingubo zokulala zeqhwa nama-bluebell.
Omunye wabasingathi bakho uzohlangana nawe lapho ufika ukuze akwamukele futhi akubonise izinsiza.
Sihlala endlini enkulu ngakho-ke sizotholakala izikhathi eziningi. Ngohlelo ababungazi bakho bazobe bekhona lapho uhamba.
Ngaphambi kokuvakasha kwakho unga-oda ukudla okuyisisekelo okuhlanganisa ubisi, isinkwa esisha esenziwe ekhaya, ujamu enziwe endaweni kanye nokongiwa kwempahla, ibhotela, amaqanda e-Nocton free range (inkukhu nedada), amasoseji e-Lincolnshire.
Ezinye izinto zinganikezwa ngesicelo sangaphambilini. Uhlu olunemininingwane eyengeziwe lwezinto ezinga-odwa luzothunyelwa nge-imeyili ezivakashini uma ukubhukha sekuqinisekisiwe futhi kuzodingeka lu-odwe okungenani kusasele amahora angu-48 ngaphambi kokuhlala futhi lukhokhelwe lapho lufika.
Sihlala endlini enkulu ngakho-ke sizotholakala izikhathi eziningi. Ngoh…